Soo dejisan Blokker 2.0.9 – Vessoft
Blokker – software ah si loo joojiyo helitaanka adeegyada iyo codsiyada qalab gaar ah. Software wuxuu u baahan yahay si ay u dejiyaan sirta ah iyo dooran codsiga lagama maarmaan u ah ilaalinta isticmaalka dadka aan la ogalayn. Bilowgii Blokker ah, software ka shidaa u yeelida xulay codsiyada iyo adeegyada, halka barnaamijyada kale ee lagu taageero shaqada. Blocks Blokker helaan qaabeynta ka mid ah qalabka by default oo ka hortagtaa in ka saarida ee software-ka aan aqoonta milkiilaha. Sidoo kale, iyadoo la isticmaalayo su’aal qarsoodi ah software ah u saamaxaaya in ay soo celiyaan sirta ah illoobay.
Blocks bilowga codsiyada doortay
Hawshooda u haboon ee codsiyada badbaadinta
Ilaalinta dhanka ah software ka saarida aan la ogalayn
Soo celisay sir ah iyadoo la isticmaalayo su’aal qarsoodi ah
Soo dejisan Blokker
Faallo ku saabsan Blokker
Blokker Xirfadaha la xiriira